ဒေါပုံ တံတားသစ်ပေါ်မှ ယာဉ်များကို ယာယီ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုပြီ - Yangon Media Group
ဒေါပုံ တံတားသစ်ပေါ်မှ ယာဉ်များကို ယာယီ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုပြီ
ဒေါပုံမြို့နယ်နှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်သို့ ပုဇွန်တောင်ချောင်းကို ဖြတ်သန်း တည်ဆောက်ထားသည့် ဒေါပုံ တံတားသစ်ပေါ်မှယာဉ်များ ယာယီဖြတ်သန်းခွင့်ကို ဇွန် ၁ဝ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ စတင်ကာ ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ အဆိုပါ တံတားသစ်မှယာဉ်များ ယာယီဖြတ်သန်းခွင့်ပြုပွဲကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်နှင့် ဒေါပုံမြို့နယ်တို့မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတံတားသစ်တည်ဆောက်မှုမှာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းတွင် ရာနှုန်း ပြည့်ပြီးမည်ဖြစ်ကာ သြဂုတ်လအတွင်း တံတားဖွင့်ပွဲပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီး အင်ဂျင်နီယာချုပ်(မြို့ပြ) ဦးကျော်လင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇွန် ၁ဝ ရက်က ပြောသည်။ ”ဒေါပုံတံတားသစ်ပေါ်ကနေ ကားတွေယာယီဖြတ်သန်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီ။ ယာယီဆိုတော့ ပြန်ပိတ်ထားမှာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖွင့်ပေးထားရင်း ကျန်တဲ့တံတားချဉ်းကပ်လမ်းအစရှိတဲ့ လမ်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းအတွင်း အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒေါပုံတံတားသစ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ထောက်ပံ့ငွေ ယန်း ၄၂၁၆ သန်း ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တံတားအရှည် ၂၅၃မီတာနှင့် အကျယ် ၂၁ဒသမ၅ မီတာရှိသော ကြိုတင်အားဖြည့် သံကူကွန်ကရစ် ကြိုးဆိုင်းတံတားအမျိုးအစား၊ လေးလမ်းသွားဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ လေးလမ်းသွားကားလမ်းတစ်ဖက်လျှင် နှစ်မီတာအကျယ်အဝန်းရှိ လူသွားလမ်းပလက်ဖောင်း၊ အသွားအပြန်ပါရှိကြောင်းသိရသည်။ တံတားသစ်ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းတံတားသစ်အမည်ကို ဒေါပုံတံတားဟု ပြင်ဆင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ အဖွဲ့ အစည်းအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြခဲ့ရာမှ ဒေါပုံတံတားအမည်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေါပုံမြို့နယ် မဲ ဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန့်ဇင်က ပြောသည်။
”တံတားသစ်က လေးလမ်းသွားဆိုပေမယ့် ခုယာယီဖွင့်ပေး ထားတာဆိုတော့ တံတားရဲ့ အလယ် ကြောကိုပဲ ဖွင့်ပေးထားတယ်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကို ပိတ်ထားပြီး ကျန်တဲ့လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ ဒေါပုံဘက်မှာက အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ ခံတပ်လည်းရှိခဲ့လို့ သာကေတနဲ့လည်း ဝေးသေးတာကြောင့် ဒေါပုံတံတားလို့အမည်ပြောင်းပေးဖို့ တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တံတားသစ်ကြီး ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုကိုလည်း အထိုက်အလျှောက် ဖြေလျော့ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ဒေါပုံတံတားသစ်စီမံကိန်းကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Nippon Koei ကုမ္ပဏီမှ Consultant အဖြစ် တာဝန်ယူ၍ The Consortium of Tokyu-Toyo-IIK(Tokyu Construction Co.,Ltd )., Toyo Construction Co.,Ltd. and IHL Construction Co.,Ltd တို့က တာဝန်ယူတည် ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။
အမေရိကန် ကော်လိုရာဒို တောမီး ဆိုးရွားစွာ လောင်ကျွမ်းနေဆဲ
စပိန်အသင်းမှ ထုတ်ပယ်ခံရသော နည်းပြ လိုပီတီဂွီ ကို ရီးရဲလ်အသင်း မိတ်ဆက်
တိုက်ပွဲ အရှိန်လျှော့ချရေး တပ်ချုပ်နှင့် မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် သုံးဖွဲ့ ??